US Embassy | GAZETY_ADALADALA
Bilaogy: Ilain’ny mpanao gazety Malagasy ve?
Posted on 24/06/2011 by gazetyavylavitra
Eto ampiandohana dia isaorana sahady ny fiaraha-miasa amin’ny US Embassy sy ny WWF nanasa anay bilaogera tamin’ity androany itynahafahana nanao atrikasa niaraka tamin’ireo mpanao gazety Malagasy isan’ny sangany vitsivitsy. Teny Antsakaviro, tao amin’ny Media Center / WWF no natao ny fihaonana.
Betsaka no efa mahalala ny atao hoe bilaogy, saingy ny hetaheta te-hahalala sy hampiasa azy io dia tsy nisakana ny hanoroana sy hitarihan-dàlana ireo izay mbola liana ny amin’izany.
Rehefa avy nitafatafa fohy sy nifampizara fomba fijery momba ny tombon-dahin’ny fampiasana bilaogy, miohatra amin’ny asa fanaovana gazety efa nahazatra azy, tamin’ny alàlan’ny fametrahana fanontaniana mivantana taminay bilaogera, dia rafitra nanokatra ny bilaoginy manokana ireto namana mpanao gazety ireto.
Eto amintsika no mbola vitsy ny mpanao gazety mampiasa ny tontolon’ny bilaogy ho sehatra ikarepohana ilay ‘voankazo voarara’ tsy azo navoaka tany amin’ny tontolon’ny asa, fa raha any ampita, dia efa marobe tokoa ireo matihanina amin’ny asa fanaovana gazety no miafina anaty anaram-petaka, na solonanarana hafa, ary mamoaka ireny ‘voankazo voarara’ ireny ho hita sy ho fantatry ny vahoaka amin’ny endriny bolongana. Ary dia izay iantefany avy eo no mamakafaka sy mandray izay tiany hatelina.
Ianao ve tia mihinana voamadilo, izaho kosa tia mitsako makirana? Ho antony tsy hahafahantsika mifandray va re izany e? Tsia avy hatrany no valiny. Mety ho be araka izany ny lafin-javatra tsy itoviana, fa kosa tsy sakana ireny ho an’ny bilaogera. Vao mainka aza toa kofehy mampifaningotra azy rehetra ho lasa tarika indray mihira. Miteny amin’ny anaran’ny Fahalalahan’ny Fanehoan-kevitra. Ny toy izany no irianay koa ho tonga amin’ireto namana mpanao gazety matihanina nanatrika ny atrikasa natao androany, izay nanomboka tamin’ny 2 ora mahery ary tsy nifarana raha tsy efa nahita an’Iarivo mirehitra jiro teny an-dalana namonjy fodiana.
Savaranonando ihany ny androany, fa ny manetsa be mbola ho avy, ka dia nifanome fotoana ho amin’ny tapa-bolana indray ny be sy ny maro.
Fenitra niraisana sy teny nifanomezana moa ny tsy hanomezana etoana ny anaran’ireo mpanao gazety samihafa tonga nanatrika ny atrikasa, ny toeram-piasany (mombamomba azy). Ekena izany, satria nahoana tokoa angamba hoy ianao? Inoana fa mbola tsaroan’ny maro ny fanenjehana nahazo ny bilaogera sasantsasany nandritra ireny olana nolalovan’ny firenena ireny, ary hatramin’izao aza, koa rariny loatra raha sarotiny amin’ny fiarovany ny tenany izy ireo.
Nambara tamin’ireto namana mpanao gazety ireto ihany koa anefa fa tsy miasa irery ny bilaogera Malagasy, fa misy dia misy tokoa ny fikambanana samihafa mijery sy manara-maso ny zava-mihatra amin’izy ireo ( isan’ireny ny Reporters Sans Frontiere) sy ny famoahana ataony, ary segondra no isaina dia mahalala izay zavatra manjo ny bilaogera Malagasy izao tontolo izao.
Ny bilaogy no nanombohana ny hetsika, fa mbola ho avy koa ny fampiasàna ireo sehatra maro samihafa zo trandrahana eo anivon’ny aterineto.
Tanaty firahalahiana tanteraka no nahatanterahan’ny fotoana androany.
Alohan’ny hisarahana dia indreto antontan’isa vitsivitsy nalaina tany ho any, isa izay maneho ny lanja sy toerana tsy mitsaha-mitombo tànan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra eo amin’ny sehatry ny asa fanaovana gazety. (loharano : Locita)
54% amin’ireo trano famoahana manerana izao tontolo izao no manana bilaogy
47% no mitsidika ny Twitter sy mampiasa azy ho toy ny loharanom-baovao na hanatanterahany ny fanamarinana ny vaovaony ary 35% no manao toraka izay saingy amin’ny alalan’ny Facebook;
30% no manaraka ireo bilaogy efa fantany hatrizay ary 47% no mijery hafa vaovao mihitsy;
manakaiky ny 60% no mpanao gazety manatona mivantana maka ny vaovaony eny amin’ireo tomponandraikitry ny serasera samihafa eny, ary 59% any amin’ny mpitondra tenin’ireo orinasa samihafa;
55% no milaza fa manana ny kaonty Twitter azy manokana ny toeram-piasany ary 54% no manana bilaogy iray tantanan’olon-tokana na iarahanà mpanao gazety vitsivitsy mitantana;
Lasa safidy omena tmbon-dahiny manokana ny endrika fanapariahana amin’ny alalaln’ny lahatsary ho an’ny 48% milaza fa mampiasa azy ity handrafetana ny votoaty avoakany;
1/8 amin’ireo fikambanana no tsy manana karazana votoaty mifandrohy amin’ny fampahalalam-baovaom-bahoaka, raha 1/4 izany tamin’ny fanadihadiana teo aloha natao tamin’ny taona 2008;
Eo amin’ny lafiny hatsaràn’ny asa vita, 45% amin’ny mpanao gazety nanontaniana no miaiky fa mila mamokatra votoaty misimisy kokoa miohatra amin’ny firohotan’ny fampahalalam-baovaon’olon-tsotra. Na izany aza, 44% no milaza fa mnkamam ny asany, raha 34% izany tamin’ny taona 2010 ary 27% ny 2009.
Dia mandra-pihaona indray ry zalahy sy zavavy aaaa!
Lahatsoratra mifandraika: Global Voices Online Malagasy
Filed under: anao ny fitenenana, Antanananrivo miblaogy, aterineto, fiaraha-monina, haitao, tapatapany, tontolon'ny asa | Tagged: Antsakaviro, Media Center, Reporters sans frontiere, US Embassy, WWF |	Leave a comment »